Adeegga iibka kadib - Airpull (Shanghai) Filter Co., Ltd
VCS iyo GHG
Adeegga iibka kadib
Sifeynta Hawada Compressor
Kala soocida Saliida Hawada
Compressor hawada Lubircant
Qalabka daawaynta ka dib ee loogu talagalay hawadu cadaadisay
Qalajiyaha Hawo Dessicant
Qalajiyaha hawo qaboojiye
Cunsurka Filterka Hawada Compressor
Dayactirka filter hawada
Xulashada shaandhaynta hawada
Habka Hawsha Bedelka Kala-duwayaasha Saliida Hawada
Habka Nadiifinta ee Silsiiyaha Saliida Hawada Compressor
Beddelka iyo Dayactirka Sifeynta Saliida Compressor
Sida Loo Doorto Saliidda Saliidda
Ingersoll Rand Hawo Compressor Dayactirka shaandhaynta
Tusmada Waxqabadka Hawada Compressor Air Filers
Taxadarrada Hawo Compressor Saliida Hawada
Q1: Maxaa lagu siinayaa adeega iibka kahor?
A1: Marka lagu daro weydiinta lambarka qaybta alaabta, waxaanu sidoo kale bixinnaa cabbirada farsamada alaabta. Dalabka koowaad, hal ama laba muunado bilaash ah ayaa lagu bixin karaa iyada oo aan wax kharash ah laga qaadin.
Q2: Sidee ku saabsan adeegga iibka?
A2: Waxaan dooran doonaa gaadiidka oo leh qiimaha ugu yar ee macaamiisha. Qaybta farsamada iyo waaxda hubinta tayada labadaba waxaa la siin doonaa ciyaar buuxda, si loo dammaanad qaado alaab tayo sare leh. Shaqaaleheena wax iibinta ayaa kula socodsiin doona horumarka gaadiidka. Intaa waxaa dheer, waxay diyaarin doonaan oo ay dhammaystiri doonaan dukumeentiga dhoofinta.
Q3: Intee in le'eg ayay tahay muddada dammaanadda tayada? Waa maxay nuxurka ugu muhiimsan ee adeega iibka kadib?
A3: Marka la eego goobta codsiga caadiga ah iyo saliidda mashiinka wanaagsan:
Muddada dammaanadda ee filtarka hawada: 2,000 saacadood;
Muddada dammaanadda ee filtarka saliidda: 2,000 saacadood;
Kala-soocida Saliidda Hawada Nooca Dibadda: 2,500 saacadood;
Kala-soocida Saliida Hawada Nooca ah: 4,000 saacadood.
Inta lagu jiro muddada dammaanadda tayada, waxaanu ku beddeli doonaa waqti ku habboon haddii shaqaalahayaga farsamada ay kormeeraan in alaabtu ay leedahay wax dhibaatooyin tayo leh oo halis ah.
Q4: Sidee ku saabsan adeegyada kale?
A4: Macmiilku wuxuu bixiyaa qaabka alaabta, haddana ma haysanno nooc noocaas ah. Xaaladdan oo kale, waxaanu horumarin doonaa nooc cusub oo alaabta ah haddii amarka ugu yar la gaaro. Intaa waxaa dheer, waxaan ku martiqaadi doonaa macaamiisha si ay u soo booqdaan warshadeena oo ay helaan tababar farsamo oo ku habboon. Sidoo kale, waxaan sidoo kale geli karnaa macaamiisha waxaanan bixin karnaa tababaro farsamo.
Q5: Adeeg OEM ma la heli karaa?
Weydiinta Liiska Qiimaha
Cinwaanka: 4F, ​​No.420 Huiyu Road, Degmada Jiading, Shanghai, Shiinaha
Telefoon: +86 18601764963
Xuquuqda daabacaadda ee Airpull 1996-2018